Taliska AFRICOM oo beeniyay inaysan ciidamada Kenya ay ka dhuunteen weerarkii Manda Bay - Jowhar Somali news Leader
Home News Taliska AFRICOM oo beeniyay inaysan ciidamada Kenya ay ka dhuunteen weerarkii Manda...
Taliska AFRICOM oo beeniyay inaysan ciidamada Kenya ay ka dhuunteen weerarkii Manda Bay
Taliska Militariga Mareykanka ayaa beeniyay war uu daabacay wargeyska New York Times oo sheegayay in cawska ay ku dhuunteen ciidamada Kenya markii dagaalamayaal ka tirsan Al Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga militariga Manda Bay ee gobolka xeebta dalka Kenya.
Taliska ciidamada Milatariga Africa ayaa sidoo kale sheegay in ciidammada Kenyanka iyo kuwo Amerikaanka ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu jawaabeen weerarka si looga fogaado khasaare badan isla markaasna looga hortaggo khatar hor leh.
“Weerarkii Manda Bay wuxuu muujinaya in Al Shabaab ay weli yihiin halis iyo cadow awood leh” ayuu yiri Janaraal, Stephen Townsend, oo ah taliyaha ciidammada Mareykanka ee uu fadhigeedu yahay Afrika.
Mareykanka ay saraakiil sar sare u diray saldhigga si ay usoo sameeyaan baaritaannada la xiriira weerarka.
Sidoo kale, Afhayeenka milateriga Kenya, Paul Njuguna oo ka hadlay warbixinta uu qoray wargeyska ayaa beeniyay in ciidanka Kenya ay gabaad ka dhigteen cawska isla markaasna warkaas uu yahay mid xaqiiqda ka fog.
Weerarkan ayaa waxaa ka dhintey saddex ruux oo Maraykan ah oo mid ka mid ah uu ahaa askari halka labada kalana ay ahaayeen qandaraaslayaal.